Maaddo beeraha loo isticmaalo oo la sheegay in laga qaado cudurka kansarka - BBC News Somali
Maaddo beeraha loo isticmaalo oo la sheegay in laga qaado cudurka kansarka
20 Maarso 2019
Image caption Sunta beeraha lagu buufiyo
Waxaa la ogaaday in mid ka mida waxyaalaha ugu caansan dunida ee lagu dilo qashinka beeraha uu sabab yahay in aadahana u keeno cudurka kansarka.
Arrintan waxaa cadeeyay xeer beegti maxkamad ku taala dalka Maraykanka.
Shirkada Bayer ee dalka Maraykanka oo soo saarta sunta beeraha lagu daryeelo ayaa aad ooga so hor jeesatay in walxaha kiimikada loo yaqaano glyphosate ay ku jirto tahay mid keenta cudurka kansar ka.
Laakiin guddiga xeer-beegtida ee San Francisco ayaa go'aan ka soo saaray in kiimikada ay keento lymphoma-da non-Hodgkin (cancerka ku dhaco unugyada dhiiga cad) .
Marxaladda soo socota ee maxkamadaynta waxay tixgelin doontaaa daymaha iyo khasaaraha soo gaartay Bayer.
Inta lagu jiro marxaladan, oo bilaabatay maalintii Arbacada, qareenada Mr Hardeman ayaa la filayaa in ay soo bandhigaan caddayn la sheegay inay muujinayaan dadaalka Bayer ee ku aaddan in ay saamayn ku yeeshaan saynisyahannada, xakameynaya iyo walibana dadweynaha oo ay isku dadyayeen inay ka dhaadhiciyaan in wax soo saarkoodu uu wax dhibaato ah lahayn .
Shirkaddan Jarmalka laga leeyahay , ayaa sheegtay in ay ka niyad jabsan yihiin go'aankii hore ee xeerbeegtida.
"Waxaan kalsooni ku qabnaa in caddaymaha wajiga labaad ay muujinayaan in habdhaqanka Monsanto uu ahaa mid habboon, shirkaduna maaha inay masuul ka tahay kansarka Mr Hardeman," ayay shirkaddu tiri.
Shirkada Bayer waxay weli sii aaminsanaan doontaa in cilmi seeyniska uu xaqiijin doono in sunta laga sameeyo glyphosat aysan sababin kansarka.
Maamuus loo sameeyay wiil yar oo Kansar qaba
Kiiskan ayaa ahaa oo kaliya kii labaad oo ka mid ah 11,200 dacwadood wareeg ah oo lagu soo oogay shirkadaha Maraykanka, kuwaas oo quseeya xanuunka kansarka oo la sheegay in laga qaadau sunta.
Nin kale oo kasoo jeedda California ayaa la siiyay $ 289m bishii August kadib markii maxkamada ay heshay cadeeymo in kansarka ku dhacay ay sabab aheed shirkada Bayer , isaga oo saamiyada shirkada Bayer hoos u dhaceen wakhtigaas
Lacagtaas waxaa hoos loogu dhigay $78m racfaan ayayna shirkada ka qaadan rabtaa.
Isticmaalka joogtada ah
Shirkada Bayer waxay ku doodday in tobanaan sano oo ay daraasado iyo qiimayn wadeen ay sharcigana muujiyeen in sunta beeraha qashinka ka disha ay tahay isticmaalkeedu mid badqab ah oo aan wax cudur ah sababaynin.
Mudane Hardeman, oo 70 jir ah, wuxuu dhul ku leeyahay miyiga Sonoma, California, wuxuuna si joogta ah u isticmaali jiray suntan beeraha looga dilo qashinka, laga soo bilaabo 1980-kii illaa 2012-kii, waxaana ugu dambeyntii laga kansarka dhiiga cad ku dhaca.
Garyaqaanadiisa Aimee Wagstaff iyo Jennifer Moore ayaa ku sheegay bayaan wadajir ah oo ay so sareen in Mudane Hardeman "ku faraxsan yahay" go'aanka.
"Hadda waxaan diiradda saari karnaa caddaynta ah in Monsanto aysan qaadin wax talaabo habboon , ujeedadeeduna ay tahay ilaalinta Nabadgalyada dadka ," ayay raaciyeen.
"Taa beddelkeeda, way caddahay in ficilada Monsanto aysan si gaar ah u daryeelin in badeecadoodu ay kansarka keento iyo in kale, waxa uu diiradda saara oo kaliya in uu wax ka qabato fikirka dadweynaha iyo in wax loo dhimo qofkasta oo kor u qaadaya walaac arintaan sharci ahaan ku saabsan".
Sidoo kale waxa jira dacwado kale oo maxkamadda California state u diiwaan gishan in 28 march ay jireen lammaane iyaguna sheeganaye inay qabaan kansarka ku dhaca unugyada dhiiga cad.
Waa maxay Glyphosate, khatarna ma leedahay ?
Glyphosate waxaa soo saaray shirkadda Monsanto sanadkii 1974-tii, laakiin ruqsadiisa wuxuu dhacay sannadkii 2000, hada kiimikada waxaa soo saara shirkada kala duwan . Dalka Mareykanka, in ka badan 750 waxsoosar ayaa loo isticmaala. Sannadka 2015, Hay'adda Caalamiga ah ee Cilmi-baarista Kansarka, Hay'adda Caafimaadka Adduunka, waxay soo sheegen in glyphosate "laga yaabo in uu bani-aadmiga u sababi karo kansar ".
Si kastaba ha ahaatee, Hay'adda Ilaalinta Deegaanka ee Maraykanka ayaa ku adkeysanaya inay khatar badan lahayn marka si taxadar leh loo isticmaalo.
Hay'adda badqabka Cuntada Yurub (EFSA) ayaa sidoo kale sheegtay in glyphosate aysan u badneyn in uu kansarka ku keeno aadanaha. Bishii Nofeembar 2017 wadamada Midowga Yurub waxay u codeeyeen in ay dib u cusbooneysiiyaan ruqsadda ololaha glyphosate iyago og in ay jiraan olole lagaga so horjeeday. Magaalada California - warshadaha beeraha ayaa qaaday dacwad ah in laga joojiyo kiimikada glyphosate, gobolkuna waxuu u aqoon saday inay keento kansarka.
Cuntada dheelitiran iyo nafaqada